अब विपद् पीडितले पनि पाउने छन् अनुदान ! : अब विपद् पीडितले पनि पाउने छन् अनुदान ! :
२० आश्विन २०७७, मंगलवार २०:१३ । काठमाडाैं
भूकम्प पीडितले प्राप्त गरे झैँ अब विपद्बाट प्रभावित भएका लाभग्राहीले समेत अनुदान रकम प्राप्त गर्ने भएका छन् । सरकारले त्यससम्बन्धी कार्यविधि निर्माणलाई अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । प्रस्तावित ‘विपद् प्रभावित निजी आवास पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापन अनुदान कार्यविधि २०७७’ मा प्रभावितको प्रकृतिका आधारमा अनुदान दिइने उल्लेख छ । प्रस्तावित कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरेपछि लागू हुनेछ ।
आजको बैठकमा अन्य दुई कार्यविधिको मस्यौदासमेत प्रस्तुत भएको छ । तिनमा विपद् खोज तथा उद्धार आधारभूत तालीमको पाठ्यक्रम कार्यविधि, विपद्का समयमा खोज तथा उद्धार प्राथमिक उपचार र शव व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सामग्रीसम्बन्धी मापदण्ड छन् ।
यसअघि सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको छुट्टै पाठ्यक्रम थियो । अब यो कार्यविधि पारित भएपछि भने एकीकृत पाठ्यक्रम हुने छ ।
बैठकले मानिसको जीवन बसोबासलाई सुरक्षित बनाउने विषयमा केन्द्रित गरेर आगामी साता अन्तरराष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यनूीकरण दिवस मनाउने निर्णय गरेको पोखरेलले जानकारी दिए ।